Sida Loo Xaqiijiyo Amniga Dhismayaasha | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Cabdijabaar Sh. Axmed, March 25, 2016
Maxamed Cabdirisaaq Diriye — December 2, 2019
Amnigu waa mowduuc balaaran oo kala leh laamo badan balse si guud waxaa loogu qaybin karaa amniga dadka ‘human security iyo amniga qaranka ‘state security, amniga dadka ayaa u sii kala baxa todoba qaybood inkasta oo labadaas nooc ee guud mar mar isku soo noqdaan, marabo inaan amniga si guud uga faaloodo balse waxaan rabaa inaan ka hadlo sida loo ilaalin karo amni dhisme.
Dhisme waxa uu noqon karaa hal dabaq, hal guri ama dhisme warshadeed/Kambani laakiinse waxa ay wadaagaan qaabka loo ilaalin karo amniga goobtaas si looga hortago in koox hubaysan soo weerarto oo dad layso, in wax laga xado goobtaas, ilaalinta hantiga goobta taal, burburka iyo gubashada hantida ma guurtada ah ee meeshaas taal iyo badbaadinta dadka goobtaas ku nool ama ka shaqaynaya.
Ilaalinta iyo xaqiijinta amniga dhismayaasha waxa ay ku xirantahay deegaanka la joogo. Haddii la joogo deegaan amni xun aad ayeey u adkaaneysaa ilaalinta amniga goobtaas, tusaale dhisme ku yaal muqdisho iyo mid ku yaal Nayroobi, ilaalinta iyo sugista amnigooda waa uu kala fududyahay.
Amniga dhismayaasha waxaa loo qaybiyaa sadex ama labo, haddii dhismuhu dayd hore leeyahay, sugista amnigiisu sadex waji buu yeelanayaa, haddii dhismuhu uu san lahayn dayd wayn oo ku gadaaman, ilaalinta amnigiisu labo waji baa uu yeelanayaa.
Haddii aan ku hormaro kan hore, waxa aan kala qaadayaa sadexda waji ee amnigiisa loo sugi karo, wajiga kowaad, waxaa la sugayaa in aan daydka hore cid aan sharciyeysnayn soo dhaafi karin, in darbiga laga dhigo mid aan laga dhici karin, meelo ayaa laga isticmaalaa in darbiga lagu wareejiyo silig danabeysan. Darbiyada qayb ka mid ah ayaa lagu wareejiyaa kaamira xiran ee loo yaqaan Closed Curcuit Television (CCTV).
Waxaa jira diblomasiin si gaar ah u kirayso askar u tababaran xagga amniga, Si loo sugo amnigooda. Hadaba mala heli karaa fursad guud ahaan dalkeena amnigiisa loogu sugi karo?
Dhismayaasha Muqdisho ku yaal ee larabo in amnigooda la ilaaliyo, dhisamaha waxaa lagu wareejiyaa juwaanno waawayn oo ciid laga buuxiyey, dushana silig looga wareejiyey, si looga hortago baabuurta ay wadaan shaqsiyaadka ismiidaamiska ah, goobaha qaar waxay isticmaalaan shubka waawayn ee waddooyinka la dhigo.
Goobaha amnigooda aadka loo adkeeyo, xataa waxaa laga mamnuucaa in sawir laga qaado ama cidi isku sawirta sababta oo ah sawirkaas waxaa uu sahli karaa qorshayn weerar ama waxa uu muujin karaa god daloolo sahlan oo goobtaas laga weerari karo. Nayroobi haddaad dhex qaaddo magaalada meelo badan baad ku arkeysaa “sawirku waa ka mamnuuc”.
Ganjeelada hore, waxaa la dhigaa waardiye iyo bar koontarool oo hubinaya baabuurta, meelaha qaar ayaa laga isticmaalaa eey si aad loogu adkeeyo amniga goobtaas, Tusaale garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. Wajiga labaad waxa uu noqonayaa hubinta iyo sugista meelaha dhismaha laga geli karo, tusaale haddii tuug darbiga ka soo dhaco, waxa uu raadinayaa meel uu dhismaha ka galo, marka waxaa la hubiyaa daaqaha iyo albaabada, haddii dhismaha laga maqan yahayna, waa in si habboon loo adkeeyey qufulada ama xiridda albaabada. Waxaa habboon in dhismahu leeyahay albaabbo kala duwan oo laga bixi karo.
Wajiga sadexaad waa amniga gudaha, kaamerada CCTv ga waa lama huraan si loola socda waxa gudaha ka socda iyo cidda wax khaldeysa, ama si ay u fududaato daba-galka iyo baarista waxii khaldamey ama ciddii danbiga gashey. Dadkii ka danbeeyey qaraxii diyaaradda daalo ee sanadkii 2016ka, si dabo-gal loo sameeyo, khuburo ayaa baartay kaamerada CCTV-ga ee garoonka ku xirnayd, faalayn iyo baaris dheer ka dib, waxaa la ogaadey ciddii diyaaradda qarxisay, qofkii qaraxa loo dhiibay, laabtoobkii qaraxu ku rakibnaa ciddii dhaafisay goobta baarista iyo ciddii caawisay, taasi waxay kaliftay in la qabto ninkii howshaas ka danbeeyey oo fududeeyey qaraxa.
Waxaa lama huraan ah dhismahu in uu leeyahay qalab dhawaaqa(fire alarm) haddii dab gudaha dab ka kaco ama qabsado, dhismayaasha qaar ayaa ladhigaa gaasaska dab-demiska. Waxaa jira aalad loo yaqaan Biometric access system, waa alad shaqsiga u ogolaaneysa in uu gudaha u gudbo haddii markii hore xogtiisa meesha lagaliyey.
Qofku suulka baa uu saarayaa kadibna albaabka baa ka furmaya, haddii uu san ahayn shaqsi meesha ka diiwaan gashan(registered) ma gali karo, taasina waxay ka qayb qaadataa amniga dhismaha ama goobta shaqada.
Adduunka hadda waxaa ka jira, shirkado waawayn oo bixiya adeegga ilaalinta iyo sugista amniga, dhowr waji ayeey u bixiyaan adeegga. Shirkadda ugu caansan adduun, waxaa la yiraahdaa WARDA wolrd security service, afartan shan waddan ayuu ka hawl galaa kampanigaan.
Kiinya waxaan ku arkey KK Security iyo BM security company. Amniga goobtii lagula heshiiyo bay sugaan waliba qaabab kala duwan, KK security waxuu ku faafay waddamada, Ugaanda, Tansaniya, Malawi, Burundi Rwanda iyo DRC Kongo.
Dhammaan sadexdaan Kampani, waxay leeyihiin qayb layiraahdo K9(canine), K9 waa eeyo u tababaran jeekinka iyo baaridda, waxaana loo isticmaalaa in wax lagu ogaado sida waxyaabaha qarxa ama daroogo iyo in wax looga hortago. Eeyadu waxay leeyihiin askar si gaar ah ugu taba baran oo loo yaqaan dog handlers.
Tags: Sida Loo Xaqiijiyo Amniga Dhismayaasha
Next post Sidee Ayey Dadka U Fikiraan?
Previous post Muxuu Yahay Cudurka HIV Aids?